अलिकति बेइमानी भएको भए हामी कहाँ टिक्थ्यौं र? – ekarnalikhabar
१३ भाद्र २०७७, शनिबार ०७:२०
‘हिँड्दा पहिले दायाँ कि, बाँया खुट्टा चाल्ने भन्ने सोचेर मात्र पाइला चाल्नुपर्छ’, मुस्कुराउँदै मदनकृष्णले भने।
‘मेरो बानी अभिभावकको जस्तो छ, उसको लिडरसिप जस्तो’, मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने।
उनीहरूको निर्माण रहेको सिनेमा ‘दाल भात तरकारी’ प्रदर्शनरत: छ। यसैको प्रचारको सेरोफेरोमा जुटेको भेटमा उनीहरूको मित्रतालाई केलाउने प्रयास गर्दा मदनकृष्ठ र हरिवंश आफ्नो जीवनका ‘फ्लासब्याक’ मा बडो उत्साही ढंगले फर्किए।
मदन: त्यो गाईजात्रामा सबैभन्दा बेसी हसाउने हरिवंश नै थियो। म उसको कार्यक्रम नछुटाइकन हेर्थेँ। त्यो बेलामा म कृषिमा जागिर खाइरहेको थिएँ। त्यही बेलामा बिबिसीले प्रोग्राम प्रोडक्सन सम्बन्धी तालिम दियो। त्यसपछि म, हिरण्य भोजपुरे, भीमबहादुर थापा आदि मिलेर एउटा ‘रसरंग’ भन्ने कार्यक्रम बनायौं। हरिवंश त्यसमा भाग लिन आएको थियो। त्यहाँ अलि नजिकको चिनाजानी भयो।
रूबि दाइले ‘तपाईंहरू दुबै जना मिलेर एउटै कार्यक्रम गर्नु भन्नुभयो। त्यसपछि दुबै जनाले ‘बैकेश्वर’ को स्क्रिप्ट लेखेर तयार गर्‍यौं। कार्यक्रम राम्रो भयो राजादेखि उपस्थित सबैले मन पराए।
त्यसअघि पनि दाइसँग लगातार २ वर्ष मेरो गाईजात्रा भेट भइसकेको थियो। त्यसपछि दुई जना मिलेर गरौं न त भन्ने भयो। दुबै जना मिलेर ‘यमलोक’ लेख्यौं। त्यसअघि मैले गाईजात्रामा लगातार ३ वर्ष गोल्ड मेडल जितेको थिएँ।
त्यो बेलामा मेरो बुद्धि पुगेन त्यसलाई क्यासेटमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्ने दिमागमा आएन। ‘यमलोक’ को बेलामा मदन दाइले रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँ गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको मान्छे। म सोझो बाहुनलाई यो व्यापारिक ट्रिक नै थाहा भएन।
हरि: मदन दाइको राम्रो। एउटा चाँहि दाइको गीत गाउने क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। मेलेडियस भ्वाइस छ। अभिनयमा चाँहि कसको राम्रो तुलना नै गर्न सकिन्नँ। जस्तो ‘लालपूर्जा’ मा दाइले घनश्याम खेल्नु भएको छ, मैले धुर्वराम। दुबैमा को राम्रो भन्ने? दुबै पात्र अनुसार सशक्त।
त्यस्तै ‘१५ गते’मा बाबुछोराको जुन केमेस्ट्री छ, त्यो नमिलेको भए त्यो राम्रै हुँदैनथियो। अब स्टेजमा हामी कार्यक्रम गर्छौं। स्टेजमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा केहि भने मोनोटोनस भो भने एक मिनेट पनि टिक्न गार्हो हुन्छ। म उहाँ भन्दा, उहाँ मभन्दा अलिकति कमजोर भए, एक मिनेट पनि टिक्न गार्हो हुन्छ तर हामी जोडतोडका साथ लाग्छौं। त्यो त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो काम हामीले बराबरी राम्रो गरेकाले नै दर्शकहरूले हामीलाई राम्रो मान्नुभएको हो।
मदन: एउटा गुरू पूर्णिमाको दिनमा म अमेरिका थिएँ। हरिवंशलाई ‘वि आर गुरू अफ इच अदर, ह्यापी गुरू पूर्णिमा’ भनेर टेक्स्ट पठाएँ। उसले मलाई ‘यस यू आर नेवार गुरू आइ एम बाहुन गुरू’ भनेर तुरून्तै जवाफ फर्कायो। मैले फेरि ‘यू आर स्पेशल वान’ भनेर पठाएँ, उसले ‘यू आर स्पेशल टु’ भनेर पठायो। उसले यसरी केही लेख्यो कि फ्याट फ्याट जवाफ दिन सक्छ।
मदन: एक जना कमजोर भयो भने त्यो सन्तुलित हुँदैन। सबै राम्रो हुनुपर्छ। जस्तो ‘१५ गते’ मा हामीले हामी मात्र राम्रो गर्नपर्छ बनेर कहिले सोचेनौं। राजाराम पौडेल, किरण केसीको रोल राम्रो निस्किएपछि त्यसलाई उत्कृष्ट बनायौं। त्यसबाट दुबै जना सुपरहिट भए। सबै रोल राम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान हुन्छ।